मनोरञ्जन Archives - Page 20 of 153 - Nagarik Sandesh
Home / मनोरञ्जन (page 20)
यस्तो आयो जोन अब्राहमको ‘परमाणु’ ट्रेलर
May 12, 2018	मनोरञ्जन Comments Off on यस्तो आयो जोन अब्राहमको ‘परमाणु’ ट्रेलर
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता जोन अब्राहमको फिल्म ‘परमाणु’ को ट्रेलर रिलिज भएको छ । परमाणु (द स्टोरी अफ पोखरण) २५ मेमा रिलिज हुँदैछ । प्रोडक्सन ब्यानर जेए इन्टरटेनमेन्ट र र क्रिअर्ज इन्टरटेनमेन्टबीचको विवादका कारण फिल्म रिलिज हुन सकिरहेको थिएन । बम्बई हाईकोर्टमा फिल्मसँग सम्बन्धित मामलामा भइरहेको प्रगति पश्चात फिल्म २५ …
सुरु भयो ‘छक्का पञ्जा ३’, को को छन् कलाकार ?
May 11, 2018	मनोरञ्जन Comments Off on सुरु भयो ‘छक्का पञ्जा ३’, को को छन् कलाकार ?
काठमाडौं । लामो सिरिजतर्फ लाग्ने संकेत दिएको छक्का पन्जाको तेस्रो श्रृंखला पनि आउने भएको छ । दुई सिरिजको सफलतापश्चात् फिल्म ‘छक्का पञ्जा’ को तेस्रो श्रंखला निर्माण हुने भएको हो । शुक्रवार ‘छक्का पञ्जा ३’ को भक्तपूरको सूर्यविनायक मन्दिरमा मुहर्त गरेसँगै छायांकन आरम्भ गरिएको छ । तेस्रो पटक दीपाश्री निरौलाले निर्देशन …
हलमा त्रिपक्षीय भिडन्तः लम्फू, हिरोज र मनाङ्गे नानीबीच टक्कर
May 11, 2018	मनोरञ्जन Comments Off on हलमा त्रिपक्षीय भिडन्तः लम्फू, हिरोज र मनाङ्गे नानीबीच टक्कर
काठमाडौं । तीन चलचित्र एकैपटक हलमा लागेका छन् । फ्राईडे रिलिज अन्तर्गत बैशाख २८ गते लम्फू, हिरोज र मनाङ्गे नानी एकसाथ प्रदर्शनमा आएका हुन् । गीतसंगीत र ट्रेलरका कारण अन्य दुई फिल्मभन्दा ‘लम्फू’ दर्शकमाझ प्रतिक्षित थियो । चलचित्र सेन्सर बोर्डबाट जुनसुकै वर्गका दर्शकले हेर्न पाउने ‘यूनिभर्सल सर्टिफिकेट’ प्राप्त यस फिल्मबाट …
‘लम्फू’लाई ८० हल
May 10, 2018	मनोरञ्जन Comments Off on ‘लम्फू’लाई ८० हल
काठमाडौं । फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत बैशाख २८ गते प्रदर्शन हुन लागेको चलचित्र लम्फूले देशभरका ८० हल पाएको छ । चलचित्र एकैपटक राजधानी तथा मोफसलका मल्टिप्लेक्ससहित देशैभर रिलिज हुँदैछ । चलचित्र सोचेअनुसारकै बनेकोले दर्शकले मन पराउनेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको चलचित्र निर्माण टीमले बताएको छ । गोपालचन्द्र लामिछानेको निर्देशनमा तयार भएको ‘लम्फू’ …
कायराको रिलिज डेट सार्वजनिक, आर्यन र साम्राज्ञीको प्रतिक्षा
May 10, 2018	मनोरञ्जन Comments Off on कायराको रिलिज डेट सार्वजनिक, आर्यन र साम्राज्ञीको प्रतिक्षा
काठमाडौं । चलचित्र ‘कायरा’ को रिलिज डेट सार्वजिनक भएको छ । चकलेटी नायक आर्यन सिग्देल र बोल्ड नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह स्टारर फिल्म ‘कायरा’ साउन १८ गते रिलिज हुने भएको छ । साम्राज्ञी लण्डन र आर्यन अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेका कारण उनीहरु नेपाल फर्किएपछि एक गीत सार्वजनिक गर्दै फिल्मको औपचारिक रुपमा …
श्रद्धा र सुशान्त दुई फिल्ममा संगसंगै
May 9, 2018	मनोरञ्जन Comments Off on श्रद्धा र सुशान्त दुई फिल्ममा संगसंगै
मुम्बई । खासै व्यस्त नभएका दुई नायक नायिका सुशान्त सिंह राजपुत र श्रद्धा कपुर दुई फिल्ममा संगसंगै देखिने भएका छन् । साउथ स्टार बाहुबली नायक प्रभाससँग साहो फिल्ममा अभिनय गरिरहेकी श्रद्धालाई लिएर फिल्म बनाउने तयारीमा जुटेका छन्, दंगल निर्देशक नीतेश तिवारी । नीतेशको निर्देशनमा बन्ने सो फिल्ममा श्रद्धाको जोडी सुशान्त …
सोनम कपूरको बिहे भयो उनकै प्रेमीसँग
May 9, 2018	मनोरञ्जन Comments Off on सोनम कपूरको बिहे भयो उनकै प्रेमीसँग
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री एव्र अर्का लिजेन्ड नायक अनिल कपूरकी पुत्री सोनम कपुरले प्रेमी आनन्द आहुजासँग मंगलबार विवाह गरेकी छिन् । मुम्बईमा आयोजित समारोहमा सोनम र आनन्द वैवाहिक बन्धनमा बाधिएका हुन्। आनन्द पेशाले व्यापारी हुन्। वैवाहिक समारोहमा परिवारका सदस्यका साथै बलिउडका कैयौ हस्तीहरुको उपस्थिती थियो। बिहेमा सोनम रातो लेहंगामा सजिएकी …
‘ट्रिपल पी’ चलचित्र ‘कप्स’को छायांकन सुरु
May 8, 2018	मनोरञ्जन Comments Off on ‘ट्रिपल पी’ चलचित्र ‘कप्स’को छायांकन सुरु
काठमाडौं । ठूलो पर्दाको चलचित्र ‘कप्स’ को छायांकन सुरु भएको छ । सम्राट सापकोटाको निर्देशनमा बन्ने कप्समा अनुप विक्रम शाही, सन्दीपा लिम्बु, अमित गिरी, रामराज क्षेत्री र पुरन जोशी लगायतको मुख्य भूमिका रहेको छ । बैशाख २४ गते सोमबारदेखि सुरु भएको चलचित्र भदौसम्म रिलिज गर्ने तयारीका साथ छायांकन भइरहेको निर्देशक …
‘दशौँ इएनआई डि सिने अवार्ड २०७५’ उत्कृष्ट ५ मनोनयन सार्बजनिक
May 8, 2018	मनोरञ्जन Comments Off on ‘दशौँ इएनआई डि सिने अवार्ड २०७५’ उत्कृष्ट ५ मनोनयन सार्बजनिक
काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक दशौं संस्करणको रुपमा आयोजना हुँदै गरेको प्रतिष्ठित अवार्ड दशौं डि सिने अवार्डको उत्कृष्ट ५ मनोनयन सार्बजनिक गरिएको छ । खासगरी आजभन्दा १० वर्ष अगाडी डिजीटल प्रविधिमा बनेका चलचित्रहरुलाई प्रोत्साहित गरी लगानी भन्दा प्रविधिका माध्यमले प्रोत्साहित गरेमा उत्कृष्ट चलचित्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ डि …
यस्तो आयो ‘मनाङ्गे नानी’ को ट्रेलर
May 7, 2018	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on यस्तो आयो ‘मनाङ्गे नानी’ को ट्रेलर
काठमाडौं । यही बैशाख २८ गते प्रदर्शन हुने चलचित्र ‘मनाङ्गे नानी’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलर एक्सन र रोमान्सले भरिएको छ । मनाङको तिलिचो तालको सेरोफेरोमा छायांकन गरिएको यस फिल्ममा भिम गुरुङ, शान्ती गुरुङ, कुशल गुरुङ, रिया गुरुङ, जेनिशा गुरुङ, खुसी गुरुङलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । खुस …